"Na zovy na zovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako, dia mandray Ahy; ary na zovy na zovy no mandray Ahy, dia tsy mandray Ahy, fa Izay naniraka Ahy".
Ry havana malala, ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy i jesoa Kristy Tompontsika. Mbola mitohy ny fibanjinana ny lohahevitra hoe "Mandray ny famonjena ny mino" isika amin'ity Alahady ity. Ny Marka 9 and 37 no akantsika hafatra anio. Inona no tenin'Andriamanitra ho antsika anio?
1- NY TOETRA TAKIANA MBA HANDRAISANA NY FAMONJENA
Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany :"Na zovy na zovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako, dia mandray Ahy".
Ambaran'i Jesoa amin'ireto mpianany ireto fa tokony hanana fanetren-tena handray ny madinka tahaka ny zaza izy ireo, izany hoe: tsy ny hiady vononahitra sy fahefana no tokony hataony; fa ny hanaiky hikarakara izay tsy misy voninahitra akory toy ny zaza. Izany fanetran-tena izany no tena fisandratana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra<;
Ary izany no hamafisin'ny Soratra Masina manao hoe "Fa izay manandran-tena no haetry; ary izay manetry tena no hasandratra" (Matioo 23:12). Ny fanetren-tena no toetra takin'i Jesoa amin'ny mpanara-dia Azy mba hananany famonjena ao Aminy.
Ry havana, ho antsika rehetra, izay mamaky ity toriteny ity, dia ilaina ny manetry tena mba hananantsika toetra tahaka ny nataon'i Jesoa teto an-tany, ary ny amin'ny nanolorany ny ainy hamonjy ahy sy anao. I Jesoa Kristy eto dia natao ho modely ho antsika, koa ho antsika izay tsy mahay manetry tena dia tapaho ny hevitrao mba hialanao amin'io toetra miavona io. Fa ny faharoa dia izao: tsy ny fanetren-tena ihany no mandray famonjena fa ny mino indrindra indrindra koa.
2- MINO AN'I JESOA:
Eto dia tsy ny fanetren-tena ihany no takiana amin'ny mpianatra mba handraisana famonjena fa ny mino indrindra koa, araka ny voalaza hoe :"ary na zovy na zovy no mandray Ahy, dia tsy mandray Ahy, fa Izay naniraka Ahy". Miverimberina eto ny teny hoe "mandray". Ny hoe mandray an'i Jesoa Kristy ry havana dia midika hoe mino Azy koa. Ny mandray eto dia midika fa mino sy mankato ny tenin'i Jesoa ho tahaka ny finoana ny tenin'ny Ray koa. Noho izany, zava-dehibe tokoa ny fananana finoana eo amin'ny fiainana. Ny zava-misy mantsy eto dia tsy nino ireto Fariseo sy ireo olona sasany fa Jesoa dia zanak'Andriamanitra. Mihevitra izy ireo fa olombelona tahaka azy fotsiny i Jesoa ka tsy ninoany ny tenin'i Jesoa. Ary izany indrindra no hanamafisan'ny Soratra Masina hoe "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina; fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy." (Jaona 5:24). Araka izany tenin'ny Soratra MAsina izanydia zava-dehibe ny finoana an'Andriamanitra mba hananana ny fiainana mandrakizay. Izay mino an'i Jesoa ihany no hovonjena ka mandova ilay fiainana maharitra mandrakizay. Izay mino no tsy maty mandrakizay.
Ry Kristiana, zava-dehibe eo amintsika ny finoana. Ny hoe mino dia mino zavatra iray tsy hitan'ny maso fa mahavonjy. Finoana zavatra iray fa hahavonjy. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika fa "sambatra isika tsy nahita nefa nino" (Jaona 20:29). Noho izany, manana fahasambarana isika aty aoriana yzay tsy nahita sy tsy nifanerasera tamin'i Jesoa, kanefa mino.
Ireo ary no toetra tokony takiana mba handraisana ny famonjena: ny fanetren-tena sy ny finoana. Koa ivelomy izany, dia hiaina ny tena famonjen'i Jesoa ianao, ka tsy handalo fotsiny amintsika ity volona Aogositra ity. Ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. AMEN.